कोरियन भाषा परिक्षा पास भएका र पढ्दै गरेकाहरुको भविष्य अब के हुन्छ ??? कस्तो छ कोरिया जाने सम्भावना ? (भिडियो हेर्नुस्) – Khabar Patrika Np
कोरियन भाषा परिक्षा पास भएका र पढ्दै गरेकाहरुको भविष्य अब के हुन्छ ??? कस्तो छ कोरिया जाने सम्भावना ? (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, बैशाख १४, २०७८ समय: १७:१९:४६